OromiaTimes: Guyyaa Gootota Oromoo Bara 2010 Ilaalchisuun Ibsa Adda Bilisumma Oromoo
Guyyaa Gootota Oromoo Bara 2010 Ilaalchisuun Ibsa Adda Bilisumma Oromoo
Graphic Design: OromiaTimes
Ebli 15, Guuyyaa Gootota Oromoo ta’ee Adda Bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo biratti yaadatamu fi kabajamuu erga jalqabee waggoota digdamaa ol lakkoobsiseera. Guyyaan kun guyyaa miseensotni fi deggertootni Adda Bilisummaa Oromoo , uummati Oromoo bal’aa fi firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo qaroo fi muratoo bilisummaa saba isaaniif jecha lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne wareegan itti yaadatani fi kabajani dha. Kana malees Ebli 15 guyyaa qabsaa’oti Oromoo tokkummaa ummata Oromoo wareega lubbuu isaaniittin mirkaneessan galmaan gahuuf waadaa seenana itti haaromsani dha. Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 kan bara 2010 kana yeroo kabajnu eessaa kaane, eessa geenyee jirra, qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa akkamii irra gahee jira, haalli diina keenyaa akkami, haalli uummata Oromoo hoo maal irra jira, kaayyoo haqaa qabsaa’otaa fi uummati Oromoo irratti wareegaman bakkaan gahuuf maaltu nu irraa eegama kan jedhuu kaasuun barbaachisaa taha. Uummati Oromoo gaafa bittaa alagaa jalatti kufee kaasee mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa sarbame deebifachuuf qabsoo hadha’aa godhe keessatti wareegama baayyee baaseera. Keessaahuu deggertoota, miseensotaa fi hoogganooti Adda Bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf wareegama qaqqaalii hedduu baasan. Ilmaan Oromoo qaroo, hubatoo fi muratoon golee Oromiyaa hunda keessaa walitti dhufan, eenyummaa uummata Oromoo haalame dhugoomsuuf, seena fi aadaa Oromoo awwaalame boollaa baasuuf, afaan Oromoo dhabama irraa hambisuuf, walumaa gala bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf dhaaba sochii bilisummaa saba Oromoo hoogganu Adda Bilisummaa Oromoo gadi dhaaban. Bu’uureffamuu Adda Bilisummaa Oromoo irraa kaasee hoogganootaa fi miseensoti ABO dhiiraa fi dhalaan bilisummaa saba isaanii dhugoomsuuf jecha gaarrenii fi gammoojjii Oromiyaa keessatti, akkasumas mana hidhaa koloneeffataa keessatti wareegamanii fi biyyoota ormaa keessatti lubbuun isaanii darbe tarrisanii fixuun hin danda’amu. Kanneen kaayyoo kanaaf jecha lubbuu isaanii dabarsanii kennan kumoota hedduutti lakkaawamu. Ammas taanaan bilisummaa keenya mirkaneessuuf wareegama kaffalaa jirra. Har’a illee mana hidhaa Wayyaanee dhoksaa fi beekamaa keessatti qabsaawoti bilisummaa ajjeefamaa jiru. Garii ilmaan Oromoo yakka dharaan murtiin du’aa fi hidhaa waggaa dheeraa irratti dabraa jira. Kun hundi qaama wareegama goototi Oromoo bilisummaa ummataaf godhaa jiranii ti. Haga bilisummaan keenya mirkanaawuttis wareegamni goototaa addaan hin dhaabbatu. Dadhabbii fi wareegama qabsaa’ota Oromoon milkiilen argaman hedduu dha. Eenyummaa fi sabummaan Oromoo haalamee turee har’a deebi’ee dhugoomeera. Gootowwan Oromoo seenaa, aadaa fi afaan Oromoo awwaalamaa ture dhiiga isaaniin barreessan. Dammaqiinsii fi sabboonummaan Oromoo sadarkaa guddaa irra gahuu kan danda’e wareegama gootowwan Oromoo kaffalaniin ta’uunis wal nama hin gaafachiisu. Qaanqee qabsoo bilisummaa gootowwan Oromoo wareegaman facaasan har’a goleele Oromiyaa mara keessatti murnoota hawaasaa Oromoo hundaa dhaqabee finiinee sadarkaa olaanaa irratti argama. Miseensoti ABO fi ummatni Oromoo bal’aan kaayyoo gootowwan keenya irratti kufan galmaan gahuuf qabsoo bilisummaa finiinsanii sadarkaa kana irraan gahanis kabajaa fi galata guddaa qabu. Diinoti qabsoo bilisummaa Oromoo, jalqaba irraa kaasanii hanga har’aatti ABO irraa sodaa waan qabaniif isa dhabamsisuuf dhama’an iyyuu akeeki isaani galma gahaafii hin jiru. ABO fi uummata Oromoo adda baasuun qabsoo bilisummaa of duuba deebisuuf shirri diinoti xaxan fashalee ummatni Oromoo qabsoo bilisummaa galmaan gahachuuf kan yeroo kamii caalaa sochii bal’aa gochaa jira. Ummatni Oromoo diina naasuu tokko illee isaaf hin qabne dura dhaabbatee falmaa hadhawaa itti fufuun kanuma mirkaneessa. Murni Abbaa Irree aangoo irra jiru soda fi diinummaa ummata Oromoof qabu irraa , keessaattuu filmaata fakkeessaa Caamsaa 2010 godhamuun wal qabatee manni hidhaa Wayyaanee sabboontoota Oromoon guutamee jira. Na filtan malee jechuun doorsisii fi hidhaan babal’atee Oromoo hiraarsaa jira. Kun hundi tahuus Oromoon mootummaa nu miidhu, qabeenya keenya saamu, lafa keenya irraa nu buqqisu of irratti hin fillu jedhaa jira. Har’a mootummaan Wayyaanee QBO ukkaamsuuf yaalii ijibbaataa godhaa jira. Ummata Oromoo hidhuu, dararuu, ukkaamsee dhabamsiisuu fi doorsisuun qabeenya isaa bifa adda addaan saamee hiyyoomsuu fi gadadchuun hojii guyyaa mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee ti. Gochaa hammeenyaa ummata Oromoo irratti raawwatuun kan hin quufne murni bicuu Wayyaanee Oromoo lafa isaa irraa buqqisee alagaatti gurguratuutti tarkaanfatuun kan egeree ummata keenyaa balaaf saasilaa jiru tahuu hubatuu feesisa. Murni aangoo siyaasaa Itophiyaa irratti humnaan cichaa jiru kun lafa Oromoo alagaatti gurguratuu dhaan ummata Oromoo hiyyoomsuu, jireenya gadadoo akka jiraatu gochuu dhaan hamilee keessatti cabsee sodaachisee, jiilchee qabsoo irraa of duuba deebisuuf akka tahe shakkin hin jiru. Yaa ummata keenya!! Murni Wayyaanee Tigiraay kan aangoo irra jiru ummata Oromoo irraa sodaa fi jibba guddaa qaba. Qabeenyaa ummata Oromootti ni hinaafa. Sochii bilisummaa ummatni Oromoo godhu akka qara eebootti sodaata. Galma gahuun QBO du’a isaa akka tahu waan beekuuf doomsuuf shira adda adda xaxa. Diina akka ummataatti nu diineffatee lafa irraa nu haxaa’uu barbaadu jala guyyaa tokko illee buluun gaabbisiisaa fi salfachiisaa dha. Kanaaf: · Ummati Oromoo kana hubattee QBO kan ammaa daran akka finiinsitu waamicha keenya haaromsina. · Bilisummaan wareegama malee hin argamu waan ta’eef wareegama dachaa dachaa baafnee kaayyoo gootowwan Oromoo wareegamaniif bakkaan gahuuf harka wal qabannee haa kaanu. Jenna. · Biyya itti dhalannee guddanne keessatti lafa keenya irraa buqqaafamaa kadhataa fi joortuu taanee akka hafnuuf gochaa Wayyaaneen itti jiru dura dhaabbachuun falmuu caalaatti boonsaa fi seena qabeessi hin jiru. · Tokkoon tokkoo dhala Oromoo qabsoo bilisummaa sabaa deemaa jiru keessatti qooda maaliin kenne jedhee of gaafachuun yeroon ejjannoo fi gochaa keenya sirreessannu ammuma tahuu haa hubannu. · Ilmaan Oromoo sababa adda addaatiif mootummaa Wayyaaneef hojjachuun qabsoo bilisummaa ummata isaanii dura dhaabbataa jiran osoo yeroon hin dabarre akka gochaa isaanii gilgaalanii hiriira qabsaawota seenan dhaamsa dabarsinaaf. · Tokkummaa Oromoo dhiiga gootowwan Oromoon mirkanaawe tiksaa fi daran jabeessaa, humnoota tokkummaa Oromoo sharafuuf dhama’an dammaqinaan of irraa haa eegnu. · Mirgoota wareegama gootowwan Oromoon galmeeffaman tikfachaa kan nu hafan harkaan gahachuuf uummati Oromoo Qabsoo Bilisummaa keessatti hirmaannaa isaa dachaan akka guddisu waamicha goona. · Beektoti Oromoo, kaa’imman, dubartootaa fi murnooti hawaasa Oromoo hundi bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf qooda irraa eegamu akka bahan dhaamsa dabarsina. Egaa yaa ummata keenya!! Guyyaa Gootoota Oromoo bara kanaa yeroo yaadannu kaayyoo gootowwan Oromoo irratti kufan galamaan gahuuf waadaa keenya haaromsuun tahuu qaba. Diina qe’ee keenyatti dhufee nu ajjeesaa, qabeenya keenyaa saamaa fi nu xiqqeessaa jiru of irraa kaasuuf yeroo itti kakuu keenya haaromsinee sochii keenya dachaa dachaan daballu tahuu qaba. Diini nurra turuu fi gadadoon nutti jabaachuu isaatiif kan komatamu abbaa dhimmaa ti malee kan biraa tahuu hin danda’u. Wareegama bilisummaan gaafatu baafnee bilisoomnu malee humni gara biraa kan bilisa nu baasu akka hin jirre yaadannee wal haa yaadachiifnu. Kaayyoo gootowwan wareegamanii bakkaan ni geenya! Wareegamtooti keenya bara baraan ni yaadatamu! IUOf! GGB ti!! Adda Bilisummaa Oromoo Ebla 15, 2010
Gepostet von OromiaTimes an 5:47 pm